Imbiza izozwiwa ngothi kwi-IATF2021 eThekwini – Sivubela intuthuko Newspaper
ISIFUNDAZWE saKwaZulu-Natal silungisela umcimbi omkhulukazi we-Intra African Trade Fair (IATF2021) okulindeleke ukuba kube nemiviliyelo emigaqweni yaseThekwini ngesikhathi kuzocikicwa isivumelwano salo mcimbi.
Kuyimanje sewuyezwakala umoya ovunguzayo walo mcimbi okulindeleke ukuthi wenzelwe e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre mhlaka 15 kuya kumhlaka 21 kuNovember nonyaka.
Izithunywa zalo mcimbi ezizoba ziholwa ngowayenguMengameli waseNigeria uMnu Olusegun Obasanjo kulindeleke ukuba ngoLwesine zitheleke eThekwini zizoba ngofakazi ekucikicweni kwalesi sivumelwano okwenziwa yiKwaZulu-Natal. Lo mbuki ozokuba eThekwini, wandulelwe yimiviliyelo ebisedolobheni laseCape Town naseGoli.
ISIVUBELA Intuthuko ithole ukuthi owaseGoli umviliyelo bewungoLwesibili mhlaka 14 September eFour Season Hotel eWestcliffe welanywa ngowaseCape Town wona obungoLwesithathu mhlaka 15 e-The Radisson Waterfront kanti omkhulu uzoba eThekwini okuzoqala ngokucikicwa kwesivumelwano bese kube nemiviliyelo yokubunga ngoLwesine ngo-2 kuya ku 4 ntambama.
UMnu Obasanjo yena uwuSihlalo we-Inta-Africa Trade Fair (IATF2021) . Lapha uzobe ehlanganyele noNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala, uSolwazi Benedict Oramah owuMengameli we-Afreximbank, kube uMnu Albert Muchanga we-African Union Commissioner for Economic Development, Trade, Industry and Mining, uMnu Wamkele Mene owuNobhala-jikelele we-AfCFTA, uMnu Ravi Pillay ophathiswe wezokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nokoNgiwa kweMvelo KwaZulu-Natal noMnu Mxolisi Kaunda oyiMeya kuMasipala waseThekwini.
Ithimba labeluleki lizobe lizibambe zaqina njengoba konke kumele kube semgqeni kungaphanjanwa nomthetho kahulumeni. Kubikwa ukuthi ukubheduka kweCOVID 19 yikhona okuzoba wumkhombandlela wokuthi lo mcimbi uzoqhutshwa kanjani njengoba iKwaZulu-Natal kungokwesibili isingethe lo mcimbi.
Umongo walonyaka kuthiwa ngowokwakha amabuloho empumelelo ye-AfCFTA ngenhloso yokuxhumanisa amazwe awu-55 ukwenza umnotho wawo usimame. Nokho iKwaZulu-Natal kubhekele ukuba ihlomule ngo$40 billion emnothweni njengoba lo mcimbi uzohanjelwa ngabantu abawu-5 000 bese kuba izimenywa eziwu-10 000 nemibukiso ewu-1 1000. Lo mcimbi uhlelwe ngabe-African Export-Import Bank (Afrximbank) ibambisene ne-African Union (AU) ne-African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA).